I-Cedar Lake Beach - Ukuthandana Kwezwe lase-Klimt - I-Airbnb
I-Cedar Lake Beach - Ukuthandana Kwezwe lase-Klimt
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Allison
Uyemukelwa e-Cedar Lake Beach Klimt Country Romance Apartment etholakala eCedar Lake eMinneapolis, MN enobhishi lwasendaweni ngaphesheya komgwaqo. Njengoba uzungezwe izindlela zokuhamba, izindlela zokuhamba ngebhayisikili namachibi, unezinketho eziningi zokuzijabulisa elangeni. Uhamba ibanga elide ukusuka ezitolo zegrosa, izindawo zokudlela, amabha, isitolo sotshwala, izidlo ezisheshayo nezibiliboco ezinhle!
Kungakhathaliseki ukuthi usedolobheni lebhizinisi noma ukuzijabulisa leli fulethi langasese linombono omuhle wokusebenza, uphumule futhi ujabulele ingxenye enokuthula yedolobha. Itholakala cishe amamayela ambalwa ukusuka e-Ustown, amamayela amabili ukusuka e-Downtown futhi eduze ne-West End e-St. Louis Park lena yindawo enhle yokuba seduze, kodwa hhayi eduze kakhulu.
Isakhiwo sefulethi siyisikhathi esivela eminyakeni eyishumi ye-70 evumele ukubhema ngaphakathi. Kodwa akukho ukubhema okuvunyelwe efulethini.
Ifulethi linekhishi eliphelele linawo wonke amathuluzi ekhishi ozowadinga ukuze upheke ekhaya. Jabulela i-patio esophahleni ukuze uthole ubusuku obunemibala ku-Sunset Boulevard.
Vuka ukuze uthole ikhofi bese uphumula. Ibha yekhofi iphelele ngekhofi, ushukela kanye nobisi. Hlala futhi ujabulele ukubukwa kwechibi okunikezwa indawo yokuphumula nendawo yokudlela.
Thatha isipho ku-Snack Bar bese uhamba ngezinyawo zakho esihlabathini ebhishi lendawo emgwaqweni.
Leli fulethi langasese linekamelo lokulala elilodwa elinombhede omkhulu, ikhabethe eligcwele elinamahenga.
Indawo yokuphumula inosofa owodwa onezihlalo ezimbili netafula lekhofi elizungezwe ama-vinyls nesidlali-marekhodi.
Ukuhlala ngakunye uzoba nebha yokugeza ene-shampoo, i-conditioner, ibha yensipho, amathawula ezandla, ukugeza kanye namathawula okugeza. Indawo yokugeza inendlu yokugezela ephelele enobhavu neshawa.
Kunezindawo eziningi zokupaka ezitholakalayo emgwaqweni. Zizwe ukhululekile ukuletha izikebhe zakho, izikebhe, amabhodi okugwedla noma ama-kayaks ukuze uhambe ngezinyawo echibini leziqhingi e-Lake Bde Maka Ska.
Ngemva kosuku edolobheni, hlala futhi ekhaya phezu kophahla futhi ujabulele ama-sunsets amahle anikezwa yi-Minnesota ngebhodlela lewayini lamahhala. Lapho nje ilanga selishonile, vula izibani ze-patio ukuze ukhangise ngaphakathi kwesibhakabhaka sasebusuku. Bukela izinkanyezi nenyanga kanye nokuzwa umoya oqabulayo echibini.
Udinga ukuwasha izingubo? Kunemishini yokuwasha emithathu kanye nemishini yokomisa emithathu esitezi sokuqala. Letha amakota nezinto zokuhlanza izingubo ezizodayiswa kusayithi.
Uma unokungezwani komzimba nokudla okuthile noma ukuzwela, ngisikisela ukuthi ungahlali efulethini. Isakhiwo asivumeli ukubhema, kodwa ukubhema akuvunyelwe efulethini.
Le Cedar Lake Beach Klimt Country Romance Apartment itholakala ngqo eCedar Lake eMinneapolis, MN enobhishi lwasendaweni ngaphesheya komgwaqo. Njengoba uzungezwe izindlela zokuhamba, izindlela zokuhamba ngebhayisikili namachibi, unezinketho eziningi zokuzijabulisa elangeni. Uhamba ibanga elide ukusuka ezitolo zegrosa, izindawo zokudlela, amabha, isitolo sotshwala, izidlo ezisheshayo nezibiliboco ezinhle!
Digital Nomad. Advertising. Marketing. Design. Anything from Fine Arts to Graphic Design to Web Design and Development, Social Media and SEO. #AlliesAirbnb #AlliesDesigns #AlliesCustomDesigns
Uzoba nefulethi langasese kuwe futhi uzothola ikhodi yebhokisi lokukhiya ukuze ungene futhi uzenzele ekhaya. Ungangithumelela umbhalo noma nini futhi ngizobuyela kuwe ngokushesha. Kukhona Umphathi esizeni uma kudingeka, vele ungazise.
Inombolo yepholisi: STR-396332